कमिसनमा जे आउँछ सोझै प्रधानमन्त्री ओलीकोमा आउने गरि गरिएको यो सेटिंग गज्जपको रहेछ ! – Halkhabar kura
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार १७:२४
कमिसनमा जे आउँछ सोझै प्रधानमन्त्री ओलीकोमा आउने गरि गरिएको यो सेटिंग गज्जपको रहेछ !
सत्तरी करोड़ साह्रै थोरै भएकाले यो डिल अघि नबढेको देखिन्छ – यो गोकुलजी र ओलीजीलाई मात्रै भाग लगाउने कुरो पक्कै थिएन । मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्नुपर्ने र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको समेत चित्त बुझाउनुपर्ने हुनाले सत्तरी करोड़मा सरकारले चित्त बुझाएन । गोकुल त कन्भिन्स्ड़ नै देखिए पनि ओलीजी खुशी नभएको बुझियो । कम्तिमा ३-४ अर्ब ताकेको सरकारलाई ७० करोड़ मामुली लाग्यो । यो सरकार बन्नेबित्तिकैको कुरो रहेछ ।
Previous देशलाई असफल र टाट पल्टिनबाट कसले जोगाउँछ ? विदेशिएका नेपालीलाई पनि नेपालबारे बोल्ने हक छ
Next सत्तारूढ नेकपा फुट्दै, दाहाल, नेपाल र खनालको अलग पार्टी हुने !